Haddii aad gurigaaga u raadinayso iftiin iyo albaabo bir been abuur ah oo xooggan; Waxaa laga yaabaa inay tahay albaabka dhinaca beertaada ama daaradaada dambe. Waxaan kula shaqayn karnaa si aad u qaabayn lahayd albaabka birta been abuurka ah si aad u siiso ammaan dheeraad ah gurigaaga. Nashqadeenayaasheena khibradda leh ayaa ku siin doona talooyin ku saabsan ku habboonaanta birta shubka ee mashruucaaga.
Khibradayada alaabada birta ee gacanta lagu sameeyo ayaa naga kasbaday sumcad la isku halayn karo oo xagga ganacsiga ah. Waxaanu iskaashi la samaynay shirkadaha guryaha dhisa ee gobolada iyo wadamada qaarkood si aanu u bixino farshaxanka birta oo habaysan ee guryaha, guryaha la dego, dhismayaasha ganacsiga, dugsiyada, kulliyadaha, jaamacadaha, cusbitaalada iyo suuqyada laga dukaamaysto.
Waxaan bixinaa noocyo kala duwan oo albaabbo bir ah oo been abuur ah oo leh muuqaal casri ah iyo xoog sare. Kala duwanaanshaha la bixiyay wuxuu waafaqsan yahay naqshadaynta naqshadaha casriga ah waxayna diyaar u tahay rakibidda
Waxaan u soo saari karnaa albaabka birta la sameeyay iyadoo loo eegayo shuruudaha/sawirrada macmiilka.
Muuqaal cajiib ah
Adag oo aan daxal ahayn.
Si fudud loo rakibo
Baakadaha ugu fiican
Nala soo xidhiidh maanta si aad u hesho oraah lacag la'aan ah albaabadaada birta ah ee la sameeyay. Waxa kale oo aanu haynaa tiro balaadhan oo ah birta birta ah, baararka, dambiisha, rosettes, collars, duub, iwm si loo dhamaystiro naqshad kasta.
Hore: Barxadda villa gidaarka badbaadada xayndaabka birta
Xiga: Mesh birta galvanized kulul cawska mesh Kraal mesh
Xagalka fireemada Nidaamka isku xirka fareeshka xagal waxaa loogu talagalay in lagu rakibo xirmooyinka dabacsan ama adag ee codsiyada guddiga waxtarka leh Nidaamyada ayaa loo baahan yahay. Mesh-ku waa bar- alxanka gudaha ama gudaha mesh-ka iyada oo la isticmaalayo xagasha birta aan la samaynin oo ah qaab dhismeed, taasoo ka tagaysa xuduudaha; Ama waxaa lagu alxan karaa dibadda ee jir si loo qariyo xagasha. Malaa'igta birta lafteeda lama dhamaystiri karo; Sagxadaha bannaanka ah sidoo kale waa la simi karaa oo waa la dami karaa...
Hydrochloric acid u adkaysta Monel 400 aluminium mesh
Astaamaha shaashadda shaandhaynta birta aan fiicnayn 1. Aashitada wanaagsan, alkali iyo caabbinta daxalka; 2. Xoog sare, xoog xoog leh oo xoog leh, adag oo xirashada caabbinta, waara; 3. Iska caabinta oksaydhka heerkulka sare, heerkulka magaca ah ee 30 shaashadda birta ah waxay gaari kartaa 1150 ℃; 4. Heerkulka caadiga ah ee caadiga ah, taas oo ah, farsamaynta caagga ah ee fudud, si suurtogalnimada isticmaalka shaashadda birta aan la taaban karin ay kala duwan tahay; 5. Dhamaystir sare, ma jiro daaweyn dusha sare ah, dayactir ku habboon oo fudud Mat ...
Sifeynta dareeraha Warshadaha ee 304/316 Stainl...
Waxay ka kooban yihiin guryaha shaandhada, walxaha shaandhaynta ee ay taageerayaan baqashada daloolsan, iyo qabanqaabada xidhidhiyaha togan si looga fogaado marin kasta iyo isku xidh dhamaadka ikhtiyaarka ah. Shayga shaandhaynta: Shayga shaandhada dambiisha waxa ka mid ah xaashi daloolin oo birta ah, shabag-xidhka birta ah iyo marada xariirta ee birta ah Marka la eego cabbirka guud iyo darajada shaandhaynta, waxaanu sidoo kale ku siin karnaa badeecado waafaqsan shuruudaha macaamiisha. Codsiga: filtarka dambiisha ayaa ugu weyn...